Taariikhda dawlada Sucuudiga iyo qaabkii loo aas’aasay wax ka baro Qaybtii 9’aad | Qaran News
Writen by Qaran News | 5:26 pm 16th Jul, 2017
Masar waxa ay ahayd mid raacsan magac ahaan dawlada Cusmaaniyiinta . Qarnigii saddexyo tobnaad ee Hiriyada oo ku beegnaa qarnigii Sagaal iyo tobnaad ee taariikhda miilaadiga xilligaas oo uu noqday Maxamed cali baasha ninka uga masuulka ah dawlada Cusmaaniyiinta dalka Masar. Xilligaasina waxa uu ahaa xilligii ay ku fashilmeen dagaalkii ay ku soo qaadeen Faransiisku bariga Masar , taasina waxa ay keentay in ay dawladii Cusmaaniyiintu ay siiyaan madax banaani Masaarida.Waxa kale oo uu balan qaaday Suldaankii Cusmaaniyiintu inuu ciidamo u dirri doono Jaziirada Carabta kana takhalusi doono dawlada Sucuudiga iyo dacwadeeda Salafiga ah ee ay wadaba. Waxa kale oo uu sheegay Suldaanku inuu diyaarinaayo Maal, xoolo iyo kaalmooyin kalaba. Waxa kale oo uu raaciyey inuu u magacaabi doono Xaakim maamula dhulka barakaysan. Waxa arrinkaas markiiba ka soo jawaabay Maxamed oo aqbalay inuu arrinkaas u babac dhigi doono.
Waxyaabihii ku riixay in ay gasho dawlada cusmaaniyiintu dagaal waxa ka mid ahaa:-
Isku dhererinta ay isku dherarisay dawlada Sucuudigu Xijaas iyo sharaftii ay ku heshay u adeegida xaramayn ka barakaysan ,taas oo ka dhigtay in ay waydo dawlada Cusmaaniyiiintu inay suncadii ay ku lahayd caalamul Islaami iyo saamaynteedii ba , waxaanay isku arkaysay dawlada Cusmaaniyiintu in ay iyadu tahay ta u adeegaysa xaramaynka barakaysan.
Koritaanka dawlada Sucuudiga iyo fiditaanka ay ku fidaysay cidhifyada Ciraaq iyo Shaam taas ina waxa ay ku keentay warwar dawlada cusmaaniyiinta iyo maleynta ay maleeyeen in isbalaadhinta iyo horu u siisiqa Sucuudigu doonaayo in ay qabsadaan gobolada qaniga ah ee quruxda badan ee Ciraaq iyo Shaam .
Ku booritaankii Shiriif Qaalib iyo qaar ka mid ah madaxda loo xilsaaray abaabulka Xajka kuwaas oo aan matalin dawlada iyo in ay ka tagaan bidcada iyo khurafaadka xilliga lagu guda jiro mowsimka Xajka. Waxa kale oo ay samay jireen kuna dadaali jireen nimankaasi oo ayna juhdi ku bixin jireen in ay tashwiish ku furaan dawlada iyo dacwada ay waday iyagoo u xaglinaaya amarna ka qaadanaayey dawlada Cusmaaniyiinta is heer caalami ah.
Maxamed Cali Baasha iyo waxa uu jeclaa inuu sameeyo
Laab la kiciisa koobaad ee Maxamed Cali Baashe waxa uu ahaa inuu aas-aaso Imradooriyad masaari ah taas oo ka kooban Shaam, Ciraaq iyo Jaziirad la mooda carabta iyo inuu tirtiro maamulka Cusmaaniyiinta .
Waxa kale oo uu niyad u hayey jeclaana in uu magaciisu kor u qaadmo oo uu noqdo Imaamka labada caalam ee carabta iyo Islaamkaba iyo sidoo kale inuu ka takhaluso dawlada Sucuudiga oo uu baabiiyo si ay u joogsato dacwada ay wadaan.
Inuu dhimo oo yareeyo ama ka takhaluso saraakiisha iyo ciidamadiisa AL-baaniyiinta ah kuwaas oo uu cabsi ka qabay inay damaaciyaan o ama ay in qilaabaan xilliyada uu ku jiro isbalaadhita.
Waxa kale oo uu damacsanaa in uu suuq cusub uga furo Masar dhulka Xijaas kaas oo looga imanaayo dhammaan cidhifyada Jaziirada carabta . Waxa xusid mudan duulaanadii ay wadeen Turkiga iyo Masar in ay dhinacyada qaar kaga furtay murano, taas oo u fudaydisay inuu Ingiriisku si fudud u soo galo ullana wareego Imaaraadka khaliijka carabta dhulkaas ay Ingiriisku qabsadeena waxa badankiisa maamuli jiray dawlada sucuudiga. Hadaba masaalixda ay dawlada Cusmaaniyiintu waxa uu ahaa in la tirtiro dawlada sucuudiga oo Maxamed Cali baashana uu dagaal ku qaado. Maxamedn waxa uu dawlada Sucuudiga u diray ciidamo weerara. Ciidamadaasina waxa ay Sucuudiga ku soo qaadeen saddex jeer oo is daba joog aha.
Maantana halkaa ha inoo joogo Maqaalku
Lasoco qaybta 10 aad maalinta jimcaha ah ee fooda inagu soo haysa Insha Allah tacaalaa.